Ụlọ ego na ụgwọ ụlọ - Ụlọ akwụkwọ asụsụ Central, Cambridge
Ọrụ na mmemme mmekọrịta
Ọnụahịa nke Ihe Nhọrọ
Zutere gị Team
Usoro anyị na-enye
Igwe Igwe ọkụ
Nyochaa ọkwa Bekee gị
Esi edebanye aha
Esi edebanye aha?
Debanye aha na ntaneti
Ozi Visa UK
PDF Ndenye aha
Na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ
Kpọtụrụ ma ọ bụ kwụọ anyị ụgwọ
Na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ nkwụnye ego
Ntuzi na ulo ugwo
2020 ụgwọ ụlọ akwụkwọ bụ ndị a:
Igwe Igwe ọkụ GBP 260 kwa izu Ogologo oge awa 21 tinyere ihe omume / omenala. Na-agụnye nkwadebe nyocha.
General English GBP 205 kwa izu Ogologo oge awa 15 kwa izu tinyere usoro ihe omume 4-5.
N'ehihie ụtụtụ GBP 80 kwa izu Ogologo oge awa 6 kwa izu na Tuesday, Wednesday na Tọzdee. Na-agụnye nkwadebe nyocha.
Mmalite Na-amalite Amalite Mmalite GBP 60 kwa izu Ogologo oge awa 4.5 kwa izu na Tuesday, Wednesday na Thursday ụtụtụ. Ụbọchị dịgasị iche iche, dị ka iwu chọrọ.
A na - enweta ego maka ndenye aha ogologo oge na nkuzi kpụ ọkụ n'ọnụ, izugbe na nke ehihie:
4-9 izu 5% ego
10-15 izu 10% ego
16-23 izu 15% ego
Izu 24 ma ọ bụ karịa 20% ego
Ihe otu nkuzi: GBP 55 maka awa ọ bụla
Ụgwọ ụgwọ gị gụnyere:
Ihe ụlọ akwụkwọ
Inweta ohere inweta ego onwe onye
Free wif-fi na School
Asambodo na akuko maka oge zuru oke
Nyocha nyocha ọ bụrụ na achọrọ
Ọtụtụ ọrụ mmadụ na omenala
Ụgwọ ụgwọ gị anaghị agụnye:
Ọnụ ego nyocha
Akwụkwọ omume na akwukwo omume nyocha
Enyocha mkpuchi onwe na njem
Jiri ụgbọ ala ma ọ bụ ịnyịnya na-aga ma site na Ụlọ Akwụkwọ
2020 ọnụahịa ụlọ:
Onu ogugu ndi okara GBP 170 kwa izu
Bed na nri ụtụtụ homestay GBP 140 kwa izu
Inye anu ulo GBP 130 kwa izu
Ego ntinye akwụkwọ nke GBP 50 (60) metụtara akwụkwọ niile.
Enwetaghị ụgwọ ntinye ego na ụgwọ akwụkwọ. Ị ga-ede akwụkwọ ndị Cambridge nyocha banyere ọnwa 2 tupu oge nyocha.
Oge nyocha na ụgwọ maka 2020
Ubochi Ubochi Ubochi Ubochi
PET Oge 6 kwa afọ GBP 95
FCE Oge 6 kwa afọ GBP 151
CAE Oge 9 kwa afọ GBP 157
CPE Oge 4 kwa afọ GBP 164
IELTS Ọtụtụ mgbe GBP 185
Maka ozi ndị ọzọ biko gaa www.cambridgeopencentre.org na https://ielts.britishcouncil.org/ihlondon
Njem ọhụụ na njem
Ọnụ: n'etiti £ 22 na £ 47 maka njem otu ụbọchị. Biko kpọtụrụ Ụlọ akwụkwọ maka ụgwọ njem njem izu ụka.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị mee ndokwa mkpuchi iji kpuchie ọgwụgwọ, ịfu ihe onwunwe na ụgwọ ụgwọ, ma ọ bụrụ na ịnwere ịkacha akwụkwọ gị. Ọ bụrụ na ị si na European Union, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị nweta akwụkwọ ziri ezi iji nweta ọgwụgwọ n'efu.
Mgbe ị kwụrụ ụgwọ maka akwụkwọ ụlọ akwụkwọ gị na ụgwọ ụgwọ ụlọ ndị mmadụ, ọ ga-adị mkpa ka ị kwụọ ụgwọ maka ezumike ụbọchị izu ụka, njem nlegharị anya, ụfọdụ ọrụ ehihie nhọrọ, njem na site na ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ ala, ma ọ bụ ụgwọ igwe ugbo na Cambridge. Ị nwere ike iji akwụkwọ akwụkwọ n'oge ọ bụla, ma anyị ga-akwado gị ka ịzụta akwụkwọ ntụkọ asụsụ mgbe ị nọ ebe a. Anyị ga-adụ gị ọdụ ka ị bịa ma ọ dịkarịa ala £ 50 kwa izu.
Ọ bụrụ na ị debanye aha maka otu izu mgbe enwere Ọha Ezumike ị ga-enweta ego maka izu ahụ. Enweghị ọmụmụ na ụbọchị ndị na-esonụ na 2020:
Schoollọ akwụkwọ mechiri maka ezumike ekeresimesi mgbe 20 Disemba 2019 na klas ga-amalite ọzọ na Tuesday 7 Jenụwarị 2020.
Friday 10 April - Ezi Friday
Monday 13 Eprel - Ista Monday
Fraịdee 8 Mee - Mee ụbọchị
Monday 25 May - Spring Bank Ezumike
Monday 31 August - Oge Ezumike Ezumike
Ụlọ akwụkwọ ahụ mechie ememme Krismas site na 18 December 2020 gaa 5 January 2021.
Ọ bụrụ na ị kpebie ime ezumike n'oge gị, biko mara ka anyị mara. Ọ bụrụ na ị nọ ezumike maka otu izu Monday-Fraịdee, anyị agaghị akwụ ụgwọ akwụkwọ maka izu ahụ. Ọ bụrụ na ị na-apụ n'ebe obibi gị, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ iji jide ọnụ ụlọ gị.
Ụlọ akwụkwọ asụsụ Central, Cambridge
Street 41B St. Andrews Street
Ekwentị: + 44 (0) 1223 502004